Composable: elinyefe Nkwa nke Onwe | Martech Zone
Nkwa nke ịhazi onwe gị adaala. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị na-anụ maka uru dị egwu ọ na-aba, ndị ahịa na-achọ ịbawanye uru na ya zụrụ ihe ngwọta dị oke ọnụ na nke teknụzụ, naanị iji chọpụta na oge na-adịghị anya, maka ọtụtụ, nkwa nke ịhazi onwe ya dị obere karịa anwụrụ ọkụ na enyo.
Nsogbu na-amalite site na otu esi elele anya nkeonwe. Ọnọdụ dị ka azịza azụmaahịa, edobere ya site na oghere nke idozi mkpa azụmaahịa mgbe ịhazi onwe kwesịrị maka onye ahụ (ọ bụrụ na nke ahụ doro anya, ọ bụ n'ihi na ọ bụ). Tinye aha mmadụ na email anaghị enyere ha aka. Gbaso ha gburugburu ịntanetị na mgbasa ozi maka ihe ha lere anya na saịtị gị anaghị egbo mkpa ha. Tailoring gị ọdịda peeji nke ọdịnaya nwere ike gboo mkpa ha, mana ọbụghị ma ọ bụrụ na sistemụ na-akwado ya nwere oghere data na njikwa ọdịnaya na-adịghị mma, nsogbu ndị a na-ahụkarị na-enyere ọtụtụ azụmaahịa nke onwe aka ịsụ ngọngọ.
Onye ọ bụla n'ime ụzọ ndị a dị ka ahịa ahịa dijitalụ nke aghụghọ dị ọnụ ala, na ndị ahịa gị ọ bụghị naanị na ịhụ site na ha, ha na-ewe ha iwe. Mana enwere uwa nke ihe omuma data, ahaziri ahaziri na-enye ndi ahia uru bara uru, na enyere ha aka ichota, nyocha, na izuru ihe ha di nfe na uzo ndi kacha ha mma.
Ọtụtụ mgbe, ụdị na-etinye aka na atụmatụ nkeonwe tupu ha nọ n'ọnọdụ iji mee ka ọ gaa nke ọma. Ọchịchọ na-egbuke egbuke nke nkata buru ibu ma kwughachi ndị ahịa na-ahapụ eziokwu dị njọ: na-enweghị ụzọ siri ike maka data na ụlọ ọrụ dijitalụ nke nwere ike ịkwado ahụmịhe nke omnichannel, ị ga-achọ nrọ ọ ga-abụ. Mana ekwesighi ka odi otua. Nhazi nke onwe nwere ike ịga nke ọma.
Ya mere, olee otu anyi ga esi esi na ihe omuma nke mere ka ndi ahia ghara inwe mmasi (nke kachasi nma) gaa na nke jikọtara ha na ihe ha choro mgbe na otu ha choro ya? Site na nchikota nke teknụzụ na usoro.
Mee Ọrụ Data Gị
Nke mbu, ndi ahia choro ichota data ha. Mara na ekwughi m ndị ahịa kwesiri inweta data ha ma o bu ahia ha dum. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere data dị ọcha ma hazie. Otu a ka ọ dị maka ndị na - emepụta ngwa ahịa, ndị na - eme akara, na ngalaba nke otu nzukọ nwere ike ịnweta data nke ya.
Naanị ahụmịhe ndị ahịa anaghị ebi na ntanetị ma dị mma n’anya; ọ na-eme na ọkwa niile na oge niile. Na-atụ anya nghọta banyere ịkọgharị mkpọsa iji mee ka ndị ahịa mara ihe niile bụ egwuregwu nzuzu. Maka ịhazi onwe ya na-arụ ọrụ, ọ dị mkpa ka a wulite ya na ahụmịhe niile, ọ bụghị naanị otu iberibe ya.
Nke ahụ pụtara na azụmahịa gị kwesịrị inwe otu echiche nke ndị ahịa gafee ebe ọ bụla metụtara. Ngwa data ndị ahịa (Ndị CDP) dị oke mma maka nke a, yana onye ibe tụkwasịrị obi dịka Myplanet nwere ike inyere gị aka ịchọpụta nke CDP kachasị mma maka mkpa gị ma nyere gị aka mejuputa ya. Site na imebi usoro nke ngalaba gị, ị ga-amalite inweta echiche zuru oke banyere ihe ahụmịhe ndị ahịa gị dị ka, site na nsọtụ ruo na njedebe. Nhazi nke mmadu na ahia ahia na akuko ndi ahia otutu oge, ma eziokwu bu ihe adighi nma.
Ikwesiri imechi data nke oge gi (RTD) ngwa. Site na RTD, ị ga-ahụ na ahụmịhe nke onwe ya kachasị mma-na-ekwenye na ozi ngwaahịa dị ugbu a ma ọrụ ọchụchọ na-arụ ọrụ kacha mma-mana ọ bụ akụkụ dị mkpa nke iwulite usoro ịhazi onwe onye nke ọma. Omume ndị ahịa na otu ọwa kwesịrị inwe ike ịkpalite mmeghachi omume nke ọma na ọwa ọ bụla, gụnyere nke ha nọ na ya, nke ahụ ga-ekwe omume naanị na RTD.
Weta data ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka ịnwe ahụmịhe ọzọ. Ihe omuma ahia banyere okwu ọchụchọ nwere ike inyere aka choputa obughi nani okwu okwu ndi ahia gi na achota ichoro ihe ha choro kamakwa okwu ndi ha na emekorita ha na ahia ha, nke gha abia aka mgbe ị di njikere idozi ihe omuma na aro ndi mmadu. .
Na n’ikpeazụ, ọ dị oke mkpa iji chịkọta data ngwaahịa gị. Iji hụ na ahụmịhe onye ahịa nwere ntanetị dabara na nke ha ga-echekwa, na ngwa ahụ, na-eji kiosk kwụ ọtọ, ịgwa Alexa, ma ọ bụ ụdị ọzọ ọ bụla akara gị nwere ike iso ndị na-ege gị ntị na-emekọrịta ihe, ịkwesịrị inwe nke ọ bụla n'ime aka ndị ahụ jikọtara na ebe data dị n'etiti. Ọzọkwa, n'okpuru akara mgbe ị dị njikere ịhazi njem ndị ahịa ahaziri iche, data kwekọrọ ga-abụ azụ nke ahụmịhe ndị ahụ.
Mee Ka Ọ Na-eme Ihe Nlereanya
Veragbazinye data nke ọma ga - enyere aka ịme nnukwu ahụmịhe, mana iji mee ka data rụọ ọrụ nke kachasị mma ma hụ na ị na - enyefe ahụmịhe knockout na ọwa ọ bụla, ị ga - atụle ịtụgharị ahụmịhe gị. Ihe owuwu na-enweghị isi (na-eme ka ahụmịhe gị na njedebe site na njedebe njedebe) abụghị maka mmadụ niile, mana maka ọtụtụ usoro dị iche iche bụ nhọrọ kachasị mma maka ịmegharị na ọnụọgụ nke mgbanwe teknụzụ.
Enweghị teknụzụ kachasị mma na-enyere akụkụ ọ bụla nke ahụmịhe aka, ọ nwere ike isi ike iwere ahụmịhe ahụ na ọkwa ọzọ na nhazi. Iji mezie njem ndị ahịa site na mkparịta ụka mkparịta ụka nke mere ka ha bụrụ akara gị, na ahụmịhe ịntanetị ebe ha na-amụtakwu banyere ngwaahịa gị, na n'ikpeazụ ịzụrụ ihe dị n'ime ngwa siri ike ịme ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na-azụ azụ - hapụ nke ahụ anaghị eso ndị ọzọ egwu.
Composable site Myplanet na-enye usoro modular nke ga - eme ka ị nweta ahụmịhe gị na ecommerce. Leveraging ecommerce usoro na teknụzụ kachasị mma, Composable na-akwadebe gị ngwa ọrụ iji mepụta ezigbo usoro omnichannel nke nwere ike ibi na nkwa nke ịhazi: data ejikọtara iji nyere gị aka ịchọpụta ọdịnaya ndị ahịa gị chọrọ; njikwa ọdịnaya na-agbanwe agbanwe iji nyere gị aka ibute ọdịnaya ahụ na ngalaba ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị; na ntọala ụlọ eji arụ ọrụ iji bulie azụmaahịa gị, na-emegharị ohere ọhụụ ọhụụ ka ha pụta.
Monoliths nwere ọnọdụ ha, ma ọ bụrụ na onyinye ha dabara na mkpa gị n'ụzọ zuru oke, ị ga-anọ n'ọdịdị. Mana ka ọdịdị ala ahụ na-agbanwe, ọ na-esiri ike ịhụ etu azịza monolithic ga-aga n'ihu na-enye ihe niile akara ga-aga nke ọma, ma nye ya n'ọkwa kachasị dị na-ahịa. Ikike ịhọrọ ma họrọ azịza nke na-abịa site na usoro ihe atụ pụtara mgbe ihe gbanwere maka azụmaahịa gị-ụdị ụdị ọhụụ ịchọrọ ịbanye, ọwa ọhụrụ ịchọrọ iji bụrụ akụkụ nke-teknụzụ na-akwado azụmahịa gị nwere ike ịgbanwe ya.
Lelee ịrị elu nke ụlọ ahịa na afọ 2-3 gara aga. Ahịa nwere ike inye ezigbo uru-tinye maka ndị na-azụ ahịa. Ndị na-azụ ahịa nwere ike inweta ihe niile ha chọrọ n'otu ebe, yana, dị ka ego a gbakwunyere, nwere ike irite isi iguzosi ike n'ihe ma ọ bụ chekwaa ụgwọ mbupu n'otu oge. Na mgbakwunye, ha na-emeghe ohere maka ihe dịka mgbakwunye ngwaahịa na-arụkọ ọrụ nke nwere ike ịkwalite ahụmịhe ngwaahịa ha ma ọ bụ mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa ha dịkwuo mfe, ha abụọ na-enye ọbụna uru bara uru maka ndị ahịa. Uru azụmaahịa maka teknụzụ a gbanyere mkpọrọgwụ na uru ndị na-eri ma na-ejikọ ozugbo na usoro nnabata dị irè-enwere ihe kpatara ahịa ji ewepụ n'oge na-adịbeghị anya.
Mana ịnwa iweta azịza n'ahịa n'ime usoro ikpo okwu nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Nkà na ụzụ ọ bụla ga-arụ ọrụ iji nweta ihe ziri ezi, mana iwebata teknụzụ ọhụụ n'ime usoro okike monolithic dị ugbu a nwere ike ịbụ ihe na-agaghị ekwe omume. Ihe ngwọta ọ bụla nwere ọrụ na oge na ego. Mgbanwe mgbanwe dị iche iche, nke kachasị mma na-enye, agbanyeghị, pụtara na oge ahụ niile na ọrụ niile na ego agaghị efu ala mgbe ịchọrọ ịhazigharị iji zụta ihe ndị ahịa chọrọ.
Nhazi nke onwe adabeghị na mkpuchi ahụ, mana ọ nwere ike. Naanị anyị kwesịrị ịma ihe banyere otu anyị si eji teknụzụ enyere ya aka. Anyị kwesịrị ịtọ ntọala siri ike maka iji data eme ihe n'ihi na ọ na-egosipụta akụkụ ọ bụla nke nhazigharị, yana anyị kwesịrị ijide n'aka na ụdị ụlọ anyị tụkwasịrị obi iji kwado usoro ịhazi onwe ya nwere ike ịkwado ya n'ezie. Nke kachasị mkpa, anyị kwesịrị ilekwasị anya na atụmatụ ndị dabere na onye ọrụ. Personkpụrụ ọ bụla ịhazi onwe ya nke na-ebute azụmaahịa chọrọ karịa mkpa onye ọrụ nwere ike ịda ada ma daa.
Rịọ A Composable ngosi
Tags: cdpComableAhịa Data Platformecommerceecommerce nkeonwemyplanetomnichannelkeonwenhazi nke onweezigbo oge dataNhazi ogeIkwuru